हेर्नुहोस आजको राशिफल : बुधबार तपाईंको दिन कस्तो ? – Khabarhouse
हेर्नुहोस आजको राशिफल : बुधबार तपाईंको दिन कस्तो ?
Khabar house | १० असार २०७७, बुधबार ००:५६ | Comments
युवा ज्योतिषी डिपी भण्डारी : वि.सं.२०७७ साल आषाढ १० गते । बुधबार । ईश्वी सन् २०२० जुन २४ तारिख । नेपाल संवत् ११४० । प्रमादी संवत्सर । उत्तरायन । ग्रीष्म ऋतु । श्रीशाके १९४२ । जेष्ठ आषाढ शुक्लपक्ष । तिथि– तृतीया,१२ घडी ३३ पला,बिहान १० बजेर १२ मिनेट उप्रान्त चतुर्थी । काठमाडौंमा सूर्योदय ०५ बजेर ११ मिनेट,सूर्यास्त बेलुकी ०७ बजेर ०१ मिनेट । दिनमान ३४ घडी ३५ पला ।
मेष : कृषि तथा पशुपालन व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने अरु व्यावसायमा नाफा कमाउन निकै नै संघर्ष गर्नुपर्नेछ । विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा सफलता पाउन बढी नै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । आमा तथा आमासरहका मानिससँग मनमुटाब बढ्नेछ । सामान्य स्वास्थ्यसम्बन्धि समस्याले पिरोल्नेछ । राजनीति तथा समाज सेवामा जनताको खासै समर्थन प्राप्त हुने छैन ।
बृष : आफन्त तथा शुभचिन्तकहरुको सहयोग तथा समर्थन पाइने ग्रह योग रहेको छ । दाजुभाइहरुसँगको सम्बन्धमा नयाँ पनको विकास हुनेछ । पराक्रम बढेर जाने हुनाले साहसिलो काम गर्ने आट आउनेछ । माया प्रेममा नजिक हुने समय रहेको छ भने दाम्पत्य जीवन सुखी रहनेछ ।
मिथुन : आफ्ना समस्याहरु परिवार तथा आफन्तले बुझ्ने हुँदा काम गर्न सहज हुनेछ । थोरै बोलेर धन आर्जन गर्न सकिनेछ भने बोलीको प्रभाव बढ्ने हुँदा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरु गर्न सकिने छ । माया प्रेममा विश्वास बढ्नेछ भने जीवनसाथीको सहयोगले नयाँ कामको थालनी गर्न सकिनेछ । विद्यार्थीहरुले थोरै समय दिँदा पनि उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सक्नेछन् । व्यापार व्यावसायमा मन्दी आउनेछ ।
कर्कट : राजनीति तथा समाज सेवामा गरिएको लगानीबाट भनेजस्तो उपलब्धी हासिल हुने छ भने राज्यबाट पद प्रतिष्ठा पाउने योग रहेको छ । सुन्दर तथा विलासी वस्तुको प्रयोग गर्न पाइने तथा सुन्दर वस्त्र पहिरनबाट अरुको मन आफूतिर आकर्षित गर्न सकिनेछ । पढाइ लेखाइमा उत्कृष्ट नतिजा हात पार्दै अगाडी बढ्न सकिने ग्रहयोग रहेको छ ।
सिंह : आत्मीय मित्र तथा सहयोगीको सहयोग नपाउदा थालेका कामहरु बीचमा छोड्नु पर्ने हुनसक्छ । समय प्रतिकूल बन्नेछ भने यहिबेलामा आय आम्दानीका बाटाहरु साँघुरा हुने छन् । काम वा अध्ययनको शिलशिलामा विदेशी भूमिमा हुनु हुन्छ भने सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुहोला । प्रेम प्रशंगमा चिसोपनले जरा गाड्नेछ ख्याल गर्नुहोला ।
कन्या : प्राकृतिक स्रोत साधन,सरकारी स्रोत तथा अन्य भौतिक सम्पतीको प्रयोग मार्फत आम्दानी बढाउन सकिनेछ। माया प्रेममा आत्मियताको बढोत्तरी हुनेछ भने घर परिवारका सदस्यहरुबाट सहयोग पाइने छ । विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा अरु दिन भन्दा राम्रो प्रगति गर्न सकिनेछ ।
तुला : प्रतिस्पर्धीहरु परास्त हुनेछन् भने नयाँ काम पाउने तथा नोकरीमा बुढुवा हुने योग रहेको छ । व्यापार व्यावसायबाट न्यून आम्दानी हुने छ । अध्ययनमा विजय हुने योग रहेको छ भने अन्य साथी हरुलाई किनारा लगाउँदै पुरस्कार हात पार्न सकिनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा समय दिनेहरुले पद पाउने समय रहेको छ ।
बृश्चिक : खोज तथा अनुशन्धानमा सकारात्मक नतिजा हात लगाउन सकिने हुनाले शरीरमा थप उर्जा पैदा हुनेछ । सरकारी तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा तपाईंको वर्चस्व कायम रहेनेछ । प्रेम सम्बन्धमा आत्मियताको विकास हुनेछ भने घर परिवार मा सबैसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापना गर्न सकिनेछ । धर्म कर्ममा समय दिन सकिने हुनाले मन शान्त रहने छ ।
धनु : परिवार तथा आफन्त जनसँग मनमुटाव बढ्नेछ भने पति पत्नी तथा माया प्रेममा अविस्वास सिर्जना हुनेछ । सवारी साधन तथा यात्रा गर्दा विशेषध्यान दिनुहोला दु’र्घटना तथा अप्रिय घटना घट्न सक्छ । विद्या तथा प्रतिस्पर्धामा सफलता पाउन निकै नै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याले सताउनेछ भने आफन्त तथा विश्वास गरेकैहरुबाट धोका हुनेछ ।
मकर : दाम्पत्य जीवनमा एकअर्कालाई सहयोग गर्दै दैनिकी सुखद तथा सम्बृद्ध बनाउन सकिनेछ । पढाइ लेखाइमा थोरै समय दिएपनि उत्कृष्ट नतिजा हात पार्न सकिनेछ। स्वास्थ्य सबल रहने हुँदा शरिरमा एक किसिमको जोस जागर आउने छ । माया प्रेममा नजिकिने समय रहेकोछ भने विलासी तथा भौतिक वस्तु प्राप्तिको गतिलो योग रहेकोछ ।
कुम्भ : दाम्पत्य जीवनमा एकअर्कालाई सहयोग गर्दै दैनिकी सुखद तथा सम्वृद्ध बनाउन सकिनेछ। पढाइ लेखाइमा थोरै समय दिएपनि उत्कृष्ट नतिजा हात पार्न सकिनेछ । स्वास्थ्य सबल रहने हुँदा शरीरमा एक किसिमको जोस जागर आउने छ । माया प्रेममा नजिकिने समय रहेको छ भने विलासी तथा भौतिक वस्तु प्राप्तिको गतिलो योग रहेको छ ।
मीन : बौद्धिक कार्यमा सहभागी भइ आफ्नो गतिलो प्रस्तुति पस्कने अवसर प्राप्त हुनेछ । पढाइ लेखाइमा सुधार भएर जानेछ भने नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिने छ । परिवार तथा सन्तानबाट तपाईंल गरेको काममा सहयोग हुनेछ । माया प्रेममा विश्वासको वातावरण बढेर जानेछ भने भौतिक धन सम्पत्ति लाभ हुने समय रहेको छ ।
तपाईंको दिन शुभ रहोस् । युवा ज्योतिषी डिपी भण्डारी ज्योतिष परामर्ष सेवा केन्द्र । चाबहील, काठमाडौं फोन न.९८०८३०७२७५ नोट:चिना तथा टिप्पन बनाउन,चिना हेराउन तथा वास्तुसँग सम्बन्धित जानकारीको लागी अवश्य सम्झनुहोला ।